अमेरिकाको बोस्टनस्थित ग्यास पाइपलाइनमा भयानक धमाका, उद्धार कार्य जारी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अमेरिकाको बोस्टनस्थित ग्यास पाइपलाइनमा भयानक धमाका, उद्धार कार्य जारी
अमेरिका । अमेरिकाको बोस्टनमा ग्यास पाइपलाइनमा भयानक धमाका भएको छ। धमाकामा परी ६ जना व्यक्ति घाइते भएका छन् भने सयौँ व्यक्तिलाई त्यहाँबाट उद्धार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
धमाकापछि पूरै क्षेत्र धुँवाले ढाकेको छ। प्रहरीले यस क्षेत्रलाई घेरामा लिएको छ भने भने विभिन्न बचाउ कार्य जारी राखेको छ। न्यूज एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार घाइते व्यक्तिलाई जनरल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।
स्थानीय प्रहरीका अनुसार यस क्षेत्रमा धमाकाबाट करीब ७० स्थानमा आगलागी भएको छ। ग्यास पाइपलाइनमा आगलागी भएका कारण यो फैलिएको समाचारमा बताइएको छ। ग्यास पाइलाइन भएको कम्पनीले अपग्रेडको काम गर्ने क्रममा उक्त धमाका भएको थियो।